Kiiboodhka HyperX Alloy Core iyo jiirka Pulsefire Core, dib-u-eegis qoto dheer | Wararka Gadget
Miguel Hernández | 02/09/2021 13:34 | La cusbooneysiiyay 02/09/2021 13:40 | Dood-wadaag, General, Reviews
Qalabka lagu magacaabo Ciyaarta Waxay yihiin badeeco ay sii kordhayaan baahida ay u qabaan kuwa maalmo dheer oo madadaalo ah ku qaata kormeeraha hortiisa, sidaa darteed, jiir wanaagsan iyo kiiboodh khaas ah ayaa ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah in la helo natiijooyin wanaagsan galabteena dheer ee dagaalka dhijitaalka ah. HyperX Waxay sannado badan u soo bandhigaysay alaab tayo leh ciyaartoydii ugu badnayd, kuwan aan maanta falanqaynayna waa laba aasaasi oo aan ka maqnaan karin dejintaada.
Waxaan ku tusineynaa keyboard -ka Alloy Core iyo jiirka ciyaarta Pulsefire Core ee HyperX si aad xirfadahaaga ugu tusto qalabka ugu fiican. Sidii haddii aysan taasi ku filnayn, dusheeda waxaad ku heli kartaa gabi ahaanba lacag -la’aan raashinkan raafka ah ee aan kuu samaynayno, miyaad seegaysaa?
Waxaan dhowaan gaarnay 10.000 oo macaamiil ah YouTube -ka, halkaas oo aad ka heli karto falanqaynteena iyo casharradeena ugu wanaagsan, sidaa darteed waxaan go'aansannay inaan dhammaantiin ugu dabbaaldegno gacanta HyperX, shirkaddu waxay rabtay inay iskaashato iyadoo na siineysa keyboard Daawaha Core iyo jiir Pulsefire Core, laba ka mid ah alaabteeda muhiimka u ah dejinta wanaagsan, sidaa darteed waxaan halkaan kuugu daynaa falanqaynta mid kasta oo ka mid ah alaabooyinkan, iyo dhammaanba Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad kaqaybqaadato bakhtiyaanasiibka, waxaanan kaaga tagaynaa hoosta shuruudaha ka -qaybgalka:
Miyaad rabtaa inaad ku guuleysato keyboard -kan iyo xirmada jiirka ee @HyperX? Ka qayb qaado our #dhoodaan oo hel jiirka ciyaarta Pulsefire Core iyo keyboard Alloy Core.
- Na raac?
- Faallo: #HyperXActGadget#Lattery #Gaming #HyperX #Qalabkahttps://t.co/UzTO2w2DGA
- Qalabka Gadget (@agadget) September 2, 2021
1st raac HyperX iyo ActualidadGadget on Twitter
2aad ku biir kanaalka YouTube ee ActualidadGadget
3aad Sii RT tweet -ka isku aadka
Faallada 4aad ku qor hashtag #HyperXActGadget
5aad Waxaad ku guuleysan doontaa ka -qaybgal dheeraad ah haddii aad faallo ka bixiso fiidiyaha
Waxaan wajahaynaa barbaro qaran, guuleystaha waa inuu lahaadaa deganaansho dhul qaran (Spain). Waxaan ku siin doonaa guuleystaha labadaba faallooyinka fiidiyaha YouTube -ka iyo annaga xisaabtayada Twitter -ka. Ku guuleystaha isku aadka waxaa lagu shaacin doonaa RRSS -ka iyo kanaalka 10/09/21 saacadda 12:00.
1 Kiiboodhka HyperX Alloy Core
2 Jiirka Muhiimka ah ee HyperX Pulsefire
Kiiboodhka HyperX Alloy Core
Kiiboodhka xuubka HyperX leeyahay qaar cabirrada 443,2 milimitir oo ballaaran; 175,3 milimitir oo qoto dheer iyo 35,6 milimitir oo sare, waxaan sidaas ku helnaa kiiboodh cabbir buuxa leh, taas oo ah, inta u dhexeysa 104 iyo 105 furayaasha sida waafaqsan heerarka suuqa. Ku saabsan culeys waxoogaa ka badan kiilogaraam si aad si fiican ugu degto miiska (gaar ahaan 1.121 garaam).
Waxaan ka hadleynaa kumbuyuutar leh xarig fiiqan, oo dhererkiisu yahay 1,8 mitir, ku filan in si habboon "loo qariyo" fiilooyinka qaab -dhismeedkayaga oo loo sameeyo sida ugu fudud ee suurtogalka ah.
Marka laga hadlayo tilmaamaha farsamo, waxaan xusuusannaa inay tahay keyboard -ka xuubka, wuxuu leeyahay xiriir USB 2.0 iyo xaddiga codbixinta ee 1.000 Hz. Sida iska cad waxay leedahay nidaam anti-ghosting ah oo furayaal badan leh oo markeeda waxay leedahay furayaal u heellan xakamaynta warbaahinta badan.
Waxaan leenahay «hab ciyaar» si loo kordhiyo astaamaha, iyo sida keyboard kasta oo wanaagsan Ciyaarta xuubka, waxaan wajahaynaa keyboard -ka u adkaysta daadinta dareeraha. Waxa kale oo aanu leenahay badhanno si degdeg ah loo heli karo taasi waxay noo oggolaanaysaa inaan hagaajinno iftiinka, qaababka iftiinka iyo qaabka ciyaarta, wax aan ka mahadcelinno marka aan la falgalno menu -yada kala duwan si aan u badbaadino waqtiga.
Waxaan xitaa, haddii aan rabno, xiri karno kiiboodhka. Waxay leedahay bar khafiif ah oo leh lix saamayn hore loo sii sameeyay: Wareegga midabka, mawjadda spectrum, neefsashada, adag, shan aag, iyo aurora. Iftiimintan oo dhan waxaa loo wareejiyaa aagga furaha, taas oo sidaas si la mid ah u iftiimaysa, laakiin haddii aan doorbideyno, iyada oo loo marayo barnaamijka waxaan si madaxbannaan u hagaajin karnaa furayaasha. shan aag oo midabyo badan leh.
Ahaanshaha kiiboodhka xuubka, waxay bixisaa jawaab wanaagsan iyo dabcan farqi la taaban karo oo ka muuqda teebabka farsamada, xaqiiqda ah inay aad u aamusan tahay. Si la mid ah, safarka furayaasha ayaa aad ugu eg kan kiiboodhka makaanikada wuxuuna leeyahay jawaab deg deg ah. Kiiboodhkaan, marka lagu daro iswaafajinta Windows, Waxay la jaan qaadi kartaa PS4, PS5, Xbox Series X / S iyo Xbox One. Shaki la'aan, beddel aad u xiiso badan oo ku dhow 50 euro websaydhka rasmiga ah ee HyperX iyo goobaha caadiga ah.
Jiirka Muhiimka ah ee HyperX Pulsefire
Jiirku waa muhiim ama waa ka badan yahay kiiboodh wanaagsan, markaa hadda waxaan u dhaqaaqnaa inaan falanqeyno saaxiibka ugu fiican, Pulsefire Core HyperX. Waxaan leenahay jiirka ergonomic simmetrical ah oo leh cabbir 119,3 milimitir oo dherer ah, dhererkeedu yahay 41,30 milimitir iyo 63,9 milimitir oo dherer ah. Miisaanka, haddii aynaan tirin fiilooyinka waa 87 garaam, fiilada waxay ku socotaa ilaa 123 garaam, sidaa darteed jiirkani waa xoogaa iftiin ku jira qaybtiisa.
Fiilada, faahfaahinta muhiimka ah, Waxay dhererkeedu yahay 1,8 mitir, si ay u awoodaan inay helaan dhaqdhaqaaq oo si fudud ula qabsadaan baahiyaha dejintayada. Fiiladan USB waa farsamada 2.0.
Wax ka qabashada waxqabadka dareeraha Pixart PAW3327 oo leh qaraar ah 6.200 dpi iyo taxane hore oo leh badhanka sare ee 800/1600/2400 iyo 3200 dpi marka loo eego dhadhanka isticmaale kasta. Xawaaruhu waa 220 IPS iyo dardargelinta ugu badan waa 30G. Aynu tooganno 7 badhamno, kuwaas oo dammaanad qaadeysa cimri dhererkiisu yahay 20 milyan oo guji.
Nalalka lama waayi karo RGB LEDs oo leh aag iftiin leh iyo afar heer oo dhalaalaya si aan ugu hagaajinno hadba dhadhanka ama baahidayada. Dhankeeda, waxay leedahay a Heerka codbixinta 1000 Hz iyo qaabka xogta ee 16 xabbo / dhidib. Sida kiiboodhkii hore, jiirkani wuxuu la jaan qaadayaa PC, iyo sidoo kale PS5, PS4, Xbox Series X / S iyo Xbox One, markaa iswaafajinta waa inaysan noqon arrin.
Waxaan leenahay kabaha taxanaha ah ee cabbirka caanka ah oo waliba ku leh sanduuq laftiisa. La mid ah kiiboodhka, softiweerka soo dejinta bilaashka ah HyperX Daacadnimo Waxay noo oggolaan doontaa inaan fulinno wixii isbeddel ah, gaar ahaan habaynta iftiinka. Toddobadiisa badhanna sidoo kale si buuxda ayaa loo barnaamij ahaan karaa. Dhiniciisa, jiirku wuxuu leeyahay qiime dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah kaasoo joogi doona qiyaastii 35 euro websaydhka rasmiga ah ee HyperX iyo goobaha kale.
Kiiboodhka ugu habboon iyo isku -darka jiirka ee ciyaartooyda ugu badan qiimo aad u macquul ah, Maxaad sugaysaa inaad kaqaybqaadato bakhtiyaa -nasiibkaaga oo aad hesho xirmadan keyboard -ka iyo jiirka oo gebi ahaanba bilaash ah? Ha lumin fursadan.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Reviews » Kiiboodhka 'HyperX Alloy Core keyboard' iyo jiirka 'Pulsefire Core', saaxiibbada ciyaarta kaamil ah [SWEEPSTAKES]
Ka qaybgalka bakhtiyaanasiibka